Sunday March 17, 2019 - 15:12:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya dhulalka filasdiin ee gummeysiga Yahuuda ku jira ayaa sheegaya in weerar halyaynimo oo ay fuliyeen dhalinyaro Filasdiiniyiin ah lagu dilay askar Yahuud ah.
Ugu yaraan askari Yahuudi ah iyo qof kale oo isna Yahuudi ah ayaa dhintay kadib markii ruux filasdiini ah oo Tooreey ku hubeysan uu weerar ku qaaday bar koontarool oo kutaal deegaanka Salfiit ee waqooyiga Daanta Galbeed.
Goob joogayaal ayaa sheegay in ruux Filasdiini ah oo Tooreey ku hubeysan uu askari Yahuudi xoog uga furtay qorigii uu watay kadibna uu goobta ku toogtay, daqiiqado kadib ayuu markale toogasho ku dilay qof yahuudi ah oo xoog lagu dajiyay daanta galbeed, warar kale wuxuu sheegayaa in ruuxa filasdiiniga ah horay usii kaxaystay gaari ay lahaayeen ciidamada Booliska.
Saraakiisha Booliska Yahuudda waxay sheegeen in ragga weerarka qaaday ay ahaayeen 2 wiil dhalinyara ah kuwaas oo adeegsanayay Tooreeyo, Video lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay geesinimada muslimiinta Filasdiin oo Tooreey hubkii ay wateen uga furtay askarta waxa loogu yeero Israa'iil oo ah kuwa ugu qalabka iyo tababarka wanaagsan mandiqadda loo bixiyay bariga dhexe.
Boqolaal kamid ah ciidamada Yahuudda ayaa lagu daadiyay deegaanka weerarku ka dhacay waxayna baadi goob ugu jiraan raggii weerarka fuliyay oo si xirfadeysan goobta uga dhaqaaqay.